यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की ? « Lokpath
२०७६, ९ श्रावण बिहीबार १४:३०
यी ४ राशि भएका मानिससँग संसारकै अद्भुत शक्ति हुन्छ, तपाई नि पर्नुहुन्छ की ?
प्रकाशित मिति : २०७६, ९ श्रावण बिहीबार १४:३०
काठमाडौं । मानिसको जन्मको समय, बार, राशि अनुसार भाग्य निर्धारण हुने ज्योतिषीहरु बताउछन् । ज्योतिषीहरुको भाषा अनुसार भन्ने हो भने तपाई हाम्रो जीवन राशिअनुसार चल्छ । तपाईमाथि गृह, नक्षेत्रको के कस्तो प्रभाव परेको छ, यो कुरा राशिले स्वतः दर्शाउँछ ।
तपाई कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राशिको माध्यमबाट पनि चिन्न सक्नुहुनेछ । अर्थात राशिको अन्तर्यमा एक खास खुवी हुन्छ, जुन व्यक्तिको जस्तो राशि हुन्छ त्यो खुवी स्वतः उसभित्र प्रेवश गर्छ ।
यो राशिका मानिसहरु सधैं सक्रिय रहन्छन् । मकर राशिका मानिसहरुमा आत्मविश्वास धेरै नै हुन्छ । जस कारण यो राशिका मानिसहरु धेरै छिटो सफलता हासिल गर्न सक्छन् । एजेन्सी
फ्यामिली भिजिट : कोरोना कहर कम भएपछि यी ठाउँ जाने…
दशैँ बिदामा कुन पुस्तक पढ्ने ? यी पुस्तक जसले तपाईलाई…